Diiwaangelinta saamiga - Helitaanka Stake Stake oo ka fur akoon goobtan sharadka crypto ee caalamiga ah
Stake Stake Macluumaadka isdiiwaangelinta - Sida loo tago buugga ciyaaraha ee rasmiga ah ee saamiga iyo casino dalkaaga.
Macluumaadka Mareegta Saami
Furitaanka akoon saamile
Ciyaartoyda waxay heli karaan Buuga ciyaaraha ee Stake iyo casino online ka adduunka oo dhan.
Kumanaan khamaar isboorti iyo ciyaartoy khamaar ah ayaa ka firfircoon Stake maalin kasta. Kani waa buuga isboorti ee cryptocurrency ugu weyn adduunka iyo casino wuxuuna leeyahay in ka badan 500,000 isticmaalayaasha diiwaangashan.
Caalami ahaan, Stake waxa ay haysataa shatiga Curacao halka website-ka UK uu shatiyaysan yahay oo lagu maamulayo Great Britain Guddiga Khamaarka.
Caalami ahaan, ciyaartoyda Yurub, Aasiya, Kanada, Latin America iyo meelo kale waxay awoodaan inay galaan khamaarka isboortiga ee internetka, ciyaaraha khamaarka iyo wax ka badan.
Alaabta Khamaarka ciyaaraha, casino, casino live, ciyaaraha
Code Promo NEWBONUS
Qiimaha Gunnada $1000
Shatiga Curacao (Sidoo kale shati ka haysta Guddiga Khamaarka ee Great Britain)
La asaasay 2017
Lacagaha Crypto kaliya laakiin hadhaaga akoonka waxa lagu eegi karaa USD , EUR ama JPY
Cryptocurrencies Haa - oo ay ku jiraan Bitcoin , Ethereum , Litecoin , Dogecoin , Tron , Bitcoin Cash iyo Ripple
Luuqadaha Ikhtiyaarada waxaa ka mid ah Ingiriis, Isbaanish, Boortaqiis, Ruush, Fiyatnaamiis iyo Jabbaan
App-ka Maya - madal sharadka oo buuxda ayaa laga heli karaa browserka Mobilada
Daawashada Tooska ah Haa
Taageerada Tooska ah Haa
Si aad u bilowdo inaad sharad gasho, waxaad u baahan tahay inaad furato akoon oo aad noqoto ciyaaryahan firfircoon.
Way fududahay in la galo Stake . Isticmaal xiriiriyeyaasha boggan si aad si toos ah ugu tagto shabakada caalamiga ah ee Stake halkaas oo aad ka geli karto oo aad geli karto buug-yaraha iyo casino onlineka ah.
Way fududahay in xisaabtaada laga furo Stake , sida hoos lagu sharraxay, waxayna qaadataa wax ka yar hal daqiiqo in la diwaangeliyo. Sifudud:
Aad bogga rasmiga ah ee Stake adigoo isticmaalaya boggan oo guji 'Diiwaangeli' si aad dhaqso ugu furto akoon
Samee isticmaale magac gaar ah, ama dooro inaad iska diiwaan geliso adigoo isticmaalaya akoon warbaahinta bulshada sida Facebook ama Twitch . Waxaad sidoo kale si degdeg ah isku diiwaan gelin kartaa adigoo isticmaalaya koontada Google .
Marka lagu weydiiyo haddii aad leedahay kood, geli Stake code promo NEWBONUS si aad u hesho 200% gunno dhigaal ah.
Markaad isdiiwaangeliso waxaad ahaan doontaa inaad gasho bogga rasmiga ah ee Stake . Waxa kale oo aad akoonkaaga ku geli kartaa adiga oo isticmaalaya xidhiidhiyeyaasha boggan. Markaad gudaha gasho, waxaad gali kartaa buuga ciyaaraha ee Stake iyo sidoo kale casino Stake . Ciyaartoyga cusub ahaan, waxa kale oo aad heli kartaa gunnada soo dhawaynta.
Koodhka xayaysiinta ee Stake NEWBONUS wuxuu u ogolaanayaa ciyaartoyda cusub inay helaan gunnada soo dhawaynta ugu badan ee buuga ciyaaraha ama casino. Koodhku wuxuu furayaa 200% gunno deebaaji ah wuxuuna qiimihiisu yahay ilaa $1000.
Si aad u hesho gunnada:
Iska diiwaan geli Stake adiga oo isticmaalaya isku xirka boggan
Fur akoon sida ku faahfaahsan boggan
Marka lagu weydiiyo haddii aad leedahay koodka Stake , ku qor lambarka NEWBONUS
Markaad tan sameyso, samee deebaaji lacagtaada dhabta ah ee ugu horeysa si aad u hesho lacagta gunnada. Waxaad ku heli doontaa 200% gunno deebaaji ah buugga ciyaaraha, iyadoo la heli karo ilaa $1000 ama lacag u dhiganta. Dhig $500 oo ah crypto si aad u hesho gunnada $1000 oo dhan.
Koodhka NEWBONUS waxaa loo isticmaali karaa dhammaan mareegaha Stake , taasoo u oggolaanaysa ciyaartoyga cusub inay u adeegsadaan gunnada sharadka ciyaaraha ama ciyaaraha casino!
Stake waa buuga isboorti ee cryptocurrency ugu weyn iyo casino.
Waxaad ku shubi kartaa buug-yaraha ciyaaraha ama khamaarka khadka tooska ah adoo isticmaalaya Bitcoin iyo tiro kale oo cryptocurrencies ah.
Kani waa madal sharadka bulshada ku salaysan. Hadda waxaa jira in ka badan 500,000 isticmaalayaasha diiwaangashan, iyadoo Stake laga heli karo caalamka oo dhan. Buuga-ciyaaraha iyo khamaarka ayaa leh ciyaartoy maalin walba ka soo gala wadamo kala duwan, oo ay ku jiraan Kanada, Brazil, Boqortooyada Ingiriiska iyo Japan.
Ciyaartoyda cusubi waxay dalban karaan gunno soo dhawayneed oo deeqsinimo leh iyagoo isticmaalaya koodhka xayeysiinta ee Stake NEWBONUS , iyo buug-yaraha ciyaaruhu waxay leeyihiin qaar ka mid ah fursadaha sharadka ugu fiican ee warshadaha sharadka khadka tooska ah. Guulaha waxaa lagu tiriyaa wakhtiga dhabta ah akoonkaaga, maadaama ay tani tahay goobta sharadka crypto waxaad filan kartaa lacag bixin degdeg ah.
Ciyaartoyda casino waxay dooran karaan in ka badan 2,000 oo ciyaarood. Gal goobta ' Stake crypto casino' si aad ugu raaxaysato ciyaaraha khamaarka, baccarat , roulette , blackjack iyo ciyaaro kale oo badan oo toos ah.
Waxaad ku samayn kartaa deebaaji akoonkaaga adigoo isticmaalaya Bitcoin , Ethereum , Litecoin iyo tiro ka mid ah lacagaha kale ee loo yaqaan 'cryptocurrencies'.
24/7 taageerada macaamiisha sidoo kale waa la heli karaa, oo leh waqtiyo jawaab celin degdeg ah.
Abaalmarinta VIP - Stake.com ayaa la sharaxay
Sida Looga Stake.com
Hagaha koodhka xayaysiinta ee Stake.com - Hagaha buuxa ee gunnada soo dhawaynta iyo koodka NEWBONUS